Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) Extended Version – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG-13 2016 151 min Super Hero
Superman ရဲ့ တိုကျပှဲတှေ အပွီးမှာ ပွညျသူတှရေဲ့ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျ တခြို့ ပကျြစီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။ ဒီအခကျြကို အခွခေံပွီး ပွညျသူတှကွေား Superman ကို ထောကျခံသူတှနေဲ့ ဆနျ့ကငျြသူတှေ တဈနတေ့ခွား မြားပွားလာခဲ့တာပါ။မိမိဝနျထမျးတှရေဲ့ အသကျတှေ ဘဝ တှဟော Supermanရဲ့ တိုကျပှဲ အကွားမှာ အပွဈမဲ့စှာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကို မကျြဝါးထငျထငျ တှလေို့ကျရတဲ့ Batman တဈဖွဈလဲ Bruce Wayne တဈယောကျလဲ Superman ကို နာကညျြးသှားပွီး ဆနျ့ကငျြသူတှထေဲက တဈယောကျ ဖွဈလာပါတော့တယျ။ ဒီကွားထဲ DCရဲ့ နာမညျကြျော ဗီလိနျတဈဦးဖွဈတဲ့ Lex Luthor ရဲ့ ယာလညျးညကျစေ ကွကျလဲ ပနျးစေ ဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြခကျြနဲ့ ဂန်တဝငျ hero နှဈယောကျရဲ့ ဘယျလိုတှေ ရနျတိုကျပေးဦးမှာလဲဆိုတာလဲ တှရေ့ဦးမှာပါ။
Batman Vs Superman တို့ နှဈယောကျရဲ့ တိုကျပှဲမှာ ဘယျသူ အနိူငျရသှားမှာလဲ၊ ပွနျပွလေညျမှူ ရရှိသှားမှာလား ဒါမှ မဟုတျ Lex Luthorမှာရော နောကျထပျ ဘာ အကွံအစညျတှေ ရှိနဦေးမှာလဲဆိုတာကို စိတျဝငျစားဖှယျ ကွညျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတိုကျပှဲ ကွားထဲကို ဝငျလာသူက နောကျထပျ စှမျးအားလှနျလူသား တဈဦးဖွဈပွီး DCရဲ့ အထငျကရ အမြိုးသမီး super hero ဖွဈတဲ့ Wonder Woman ပါပဲ။
ဇာတျကားထဲက တိုကျခိုကျခနျးတှဟော တော့ တကယျ ကွညျ့လို့ကောငျးပွီး ကွမျးတမျးပါတယျ။ Batman မငျးသားသဈ Ben Afleckကို ကွိုကျသူ မကွိုကျသူ ကှဲပွားနသေေးပမေယျ့ သူ့ role ကို အကောငျးဆုံး လုပျပွသှားနိုငျတာတော့ ငွငျးဖှယျရှိပါဘူး။ နောကျထပျ Justice League မှာ ပါလာမယျ့အခွား heroတှကေိုလဲ ကွိုတငျ နမူနာ ပွခဲ့ပွီး ပရိသတျတှနေဲ့ မိတျဆကျထားတာတှရေ့ပါတယျ။
ဇာတျကားအညှနျးကိုတော့ Kaung Myat Thu [Channel Myanmar] မှကူးယူဖျောပွထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
Superman ရဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အပြီးမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် တချို့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအချက်ကို အခြေခံပြီး ပြည်သူတွေကြား Superman ကို ထောက်ခံသူတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်သူတွေ တစ်နေ့တခြား များပြားလာခဲ့တာပါ။မိမိဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အသက်တွေ ဘဝ တွေဟာ Supermanရဲ့ တိုက်ပွဲ အကြားမှာ အပြစ်မဲ့စွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့လိုက်ရတဲ့ Batman တစ်ဖြစ်လဲ Bruce Wayne တစ်ယောက်လဲ Superman ကို နာကျည်းသွားပြီး ဆန့်ကျင်သူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီကြားထဲ DCရဲ့ နာမည်ကျော် ဗီလိန်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Lex Luthor ရဲ့ ယာလည်းညက်စေ ကြက်လဲ ပန်းစေ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ချက်နဲ့ ဂန္တဝင် hero နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘယ်လိုတွေ ရန်တိုက်ပေးဦးမှာလဲဆိုတာလဲ တွေ့ရဦးမှာပါ။
Batman Vs Superman တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ဘယ်သူ အနိူင်ရသွားမှာလဲ၊ ပြန်ပြေလည်မှူ ရရှိသွားမှာလား ဒါမှ မဟုတ် Lex Luthorမှာရော နောက်ထပ် ဘာ အကြံအစည်တွေ ရှိနေဦးမှာလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲ ကြားထဲကို ဝင်လာသူက နောက်ထပ် စွမ်းအားလွန်လူသား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး DCရဲ့ အထင်ကရ အမျိုးသမီး super hero ဖြစ်တဲ့ Wonder Woman ပါပဲ။
ဇာတ်ကားထဲက တိုက်ခိုက်ခန်းတွေဟာ တော့ တကယ် ကြည့်လို့ကောင်းပြီး ကြမ်းတမ်းပါတယ်။ Batman မင်းသားသစ် Ben Afleckကို ကြိုက်သူ မကြိုက်သူ ကွဲပြားနေသေးပေမယ့် သူ့ role ကို အကောင်းဆုံး လုပ်ပြသွားနိုင်တာတော့ ငြင်းဖွယ်ရှိပါဘူး။ နောက်ထပ် Justice League မှာ ပါလာမယ့်အခြား heroတွေကိုလဲ ကြိုတင် နမူနာ ပြခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဇာတ်ကားအညွန်းကိုတော့ Kaung Myat Thu [Channel Myanmar] မှကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Abigail Kuklis Ahman Green Ahney Her Alan D. Purwin Albert Valladares Alicia Regan Alma Martinez Amy Adams Anderson Cooper Andrew Sullivan Anish Jethmalani Anne Marie Damman Axel Harney Bailey Chase Barton Bund Ben Affleck Brandon Bautista Brandon Spink Brian Boland Brooke Baldwin C.T. Fletcher Callan Mulvey Carla Gugino Carmen Gangale Chad Krowchuk Charlie Rose Chris Newman Christina Wren Coburn Goss Connie Craig Cruz Gonzalez-Cadel Dan Amboyer Dana Bash Danny Mooney Dante Briggins Dave Pasch David Leach David Midura David Paris Debbie Scaletta Debbie Stabenow Dennis North Diana Gaitirira Diane Lane Duvale Murchison Ele Bardha Emily Peterson Erika R. Erickson Esodie Geiger Ezra Miller Gal Gadot Gary A. Hecker Gordon Michaels Graham W.J. Beal Greg Violand Hanna Dworkin Harry Lennix Henri Franklin Henrietta Hermelin Henry Cavill Henry Frost III Holly Hunter Hugh Maguire Inder Kumar Issac Ryan Brown Jade Chynoweth Jalene Mack Jason Hughley Jason Momoa Jay R. Adams Jay Towers Jeff Dumas Jeff Hanlin Jeffrey Dean Morgan Jena Malone Jeremy Irons Jesse Eisenberg Jesse Nagy Joe Cipriano Joe Fishel Joe Morton John Lepard Jon Stewart Jonathan Stanley Jonathan West Joseph Cranford Julius Tennon Keith D. Gallagher Kent Shocknek Kevin Costner Kiff VandenHeuvel Kirill Ostapenko Kristine Cabanban Laura Atwood Lauren Cohan Laurence Fishburne Lulu Dahl Lynch R. Travis Marcel Shihadeh Marcelo Bem Marcus Goddard Mark Edward Taylor Mason Heidger Meighan Gerachis Michael Cassidy Michael Ellison Milica Govich Miriam Lee Nancy Grace Natalee Arteaga Neil deGrasse Tyson Nene Nwoko Nicole Forester Nicole Santini Owais Ahmed Patrick Leahy Patrick O'Connor Cronin Patrick Wilson Ralph Lister Rashontae Wawrzyniak Ray Fisher Rebecca Buller Richard Burden Ripley Sobo Robin Atkin Downes Sal Lopez Sam Logan Khaleghi Sammi Rotibi Sammy A. Publes Sandra Love Aldridge Satori Shakoor Scoot McNairy Scott Edward Logan Sebastian Sozzi Shannon Garnett Sidi Henderson Soledad O'Brien Sonja Crosby Stephanie Koenig Steve Jasgur T.J. Martinelli Tao Okamoto Taras Los Theo Bongani Ndyalvane Thomas J. Fentress Tiffany Bedwell Tiffany L. Addison Tiren Jhames Tom Luginbill Vikram Gandhi Wayne E. Brown Will Blagrove Wunmi Mosaku
Option2usersdrive.com 867 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 867 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 867 MB SD (480p)
Option5usersdrive.com 2.1 GB HD (1080p)
Option7yuudrive.me 2.1 GB HD (1080p)
Option 8 sharer.pw 2.1 GB HD (1080p)
Option9storage.msubmovie.com 8.3 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 7.1
Option 10 usersdrive.com 8.3 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 7.1
Option 11 yuudrive.me 8.3 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 7.1
Option 12 sharer.pw 8.3 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 7.1